Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 8, 2010
हामीले पनि रिक्त दरबन्दी नै पूरा गर्न लागेका हौा
चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’, प्रवक्ता- जनमुक्ति सेना नेपाल
०	तपाईंहरुले नेपाली सेनाको सैन्य भर्नासागै जनमुक्ति सेनामा पनि भर्ना आहृवान गर्नु भएको छ, यसको कारण बताइदिनुस् न ?
बृहत् शान्तिसम्झौतासागै सैन्य भर्ना विवाद पटक-पटक सार्वजनिक हुादै आएको छ । शान्तिसम्झौतामा दुवै पक्षले सेना भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था कहीा, कतै उल्लेख गरिएको छैन । हतियार अनुगमन तथा सेना अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताले दुवै सेनालाई नयाा भर्ना गर्न निषेध गरेको छ । नेपाली सेनाले सुरुदेखि नै शान्तिसम्झौताको उल्लंघन गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाको लगातार भर्ना गर्दै आयो । हामीले सुरुवातको दुई चरणसम्म विरोध मात्र गर्‍यौ, जनसेनामा नयाा भर्ना गरेनौा । तेस्रो चरणमा हामीले पनि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायौा । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि हामीले भर्ना प्रक्रिया रोक्यौ । अहिले नेपाली सेनाले भर्ना प्रक्रिया खुल्ला गरेपछि कुनै प्रक्रियाले पनि हामीलाई नयाा भर्ना गर्न रोक्दैन । एउटा सेनालाई नयाा सैन्य भर्ना गर्न दिने अर्को पक्षलाई नदिने कहीा, कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसकारण नेपाली सेनाले भर्ना खोलेपछि हाम्रो लागि पनि स्वतः खुल्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
०	नेपाली सेनाले थप दरबन्दीमा होइन, खाली भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न लागेको भनिरहेको छ, तपाईंहरुले पनि रिक्त संख्या पूरा गर्न खोज्नु भएको हो ?
हामीले पनि रिक्त दरबन्दी नै पूरा गर्न लागेका हौा । नेपाली सेनाले शान्तिप्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिको पन्चानब्बे हजारको संख्यामा पूर्ति गर्दैछ । हामी शान्तिप्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडि जनमुक्ति सेनाको संख्या पैातीस हजार थियो । त्यो पैातीस हजारबाट राजनीतिकरुपमा बाहिर जान चाहने साथीहरुलाई छूट दियौा । पछिल्लो चरणमा हामी क्याम्पमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले दर्ता प्रक्रियामा जनमुक्ति सेनाको संख्या ३१ हजार तीन सय पन्ध्रजना हो । त्यो संख्यालाई अनमिनले दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उन्नाइस हजार छ सय चारमा झारिदियो । तर, अहिलेको उन्नाइस हजार चार सय छबाट समेत जनमुक्ति सेनाको संख्या केही घटेको छ । त्यसलाई पूर्ति गर्छौं । लक्ष्य हाम्रो ३१ हजार तीन सय पन्ध्र पुर्‍याउने नै हुन्छ ।
०	रक्षामन्त्रीले त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि जनमुक्ति सेनामा भर्ना रोक्ने बताएकी छिन् नि ?
रक्षामन्त्रीको भनाइमा कुनै तुक छैन । उनको भनाइलाई हामीले त्यति महत्वका साथ हेर्ने पनि गरेका छैनौा । विगतदेखि नै रक्षामन्त्रीले यस्तै नचाहिादो अभिव्यक्ति दिादै हिाडिरहेकी छिन् । उनको भनाइको कुनै महत्व छैन । रक्षामन्त्रीको भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि छैनौा, लिन पनि जरुरी छैन । रक्षामन्त्रीको चाहनाअनुसार मुलुक अगाडि बढेको भए पहिले नै उनले शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्न खोजेको थिइन् । यदि कोही जनमुखी सेनाको क्याम्पमा भर्ना प्रक्रिया रोक्न आउाछ भने त्यसको प्रतिरोध गर्न जनमुक्ति सेना तयार छ ।
०	दुवै सेनाबीच यसरी विवाद चर्कंदै जाने हो भने सेना समायोजनमा गम्भीर असर पर्दैन र ?
जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट सेना समायोजनमा कुनै खतरा पैदा भएको छैन । कतिपय पार्टीभित्रका प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले नेपाली सेनालाई उक्साउने र नेपाली सेनाभित्रको सानो हिस्सा जुन पुरानो मानसिकताको शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई उपयोग गरेर फेरि यो देशलाई युद्धमा धकेल्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् त्यही तप्काको पछिल्लो चलखेलको रुपमा सेनामा नयाा भर्ना खोलिएको हो । त्यस्तो प्रतिगमी तप्का शान्तिप्रक्रियालाई असफल गर्न बारम्बार फेल हुादै आएको छ । जेठ १४ मा पनि त्यो तप्काले शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्न खोजेकै हो । शान्तिप्रक्रिया नेपाली जनता र केही पार्टीहरुले त्यो तप्काको षड्यन्त्रलाई चिर्न सफल भए । त्यस्तो प्रतिक्रियावादी तप्का नेपालमा अब रहन सक्दैन, छिट्टै ध्वस्त हुन्छ ।
०	अब प्रसङ्ग बदलौं, व्यवस्थापिका संसद्मा चारचार पटक निर्वाचन हुादासमेत मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सहमतिमा आउन नचाहने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा हावी भएको छ । त्यसैको परिणाम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देखिएको छ । मधेसवादी दल, कााग्रेस र एमाले पार्टीभित्र दुईतीन गुट भइरहेको अवस्थामा ती गुटहरुको प्रभाव सहमति बन्नै नदिनेमा केन्दि्रत छ । आˆनै पार्टीभित्रको नेतृत्वको विरुद्धमा लाग्ने जुन प्रक्रिया देखिएको छ, त्यसैको परिणाम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देखापरेको छ । शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्न चाहने र शान्तिप्रक्रियालाई सहमतिअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेबीचको ठूलो खाडल यतिबेला प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा देखिएको छ ।
०	तपाईंहरुले प्रभुको इशारामा चल्ने कठ्पुतली सरकार भनेर विगतदेखि भन्दै आउनुभएको थियो, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निर्वाचनले निकास नपाउनुमा पनि त्यसैको निरन्तरता हो ?
विदेशी चलखेल यतिबेला प्रस्टरुपमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी आएको छ । यसको पुष्टि पछिल्लो समय श्यामशरण नेपाल आएर उनले खेलेको भूमिकाले गरेको छ । मधेसवादी दलहरुलाई भेटेर श्यामशरणले जुन निर्देशन दिए यसले विदेशी हस्तक्षेप अझ उचाइमा पुगेको प्रस्ट भएको छ ।
०	तपाईंहरुकै एक सभासद्लाई भारतीय दूतावासबाट धम्की दिएको सार्वजनिक भएको छ, यस सन्दर्भमा पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ ?
अहिले तराईमा मओवादी सखाप पार्ने अभियान जस्तो गरी एउटा ठूलो शक्ति देखिएको छ, जुन विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित छ । त्यस्तो अपराधिक समूह भारतीय सिमानाबाट नेपाल आउने र हाम्रा साथीहरुको हत्या गर्ने अनि पुनः भारत र्फकने गरेका छन् । भाडाका गुण्डाहरु हाम्राविरुद्ध अहिले थुप्रै लागिरहेका छन् । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा हाम्रा सभासद्माथि धम्की आएको हो । जुन नियतका साथ त्यस्तो धम्की आएको छ, त्यसको पछाडि ठूलै षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ ।
०	जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर कालिबहादुर खामको विषयमा उठेका विवाद’bout केही बताइदिनुस् न ?
कालिबहादुरको विषयमा जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यो अहिलेको विषय होइन । रामहरि श्रेष्ठ हत्यकाण्डसाग कालिबहादुरख खामलाई कुनै न कुनै रुपमा जोड्नुपर्छ उनलाई मात्र होइन, जनमुक्ति सेनाका थुप्रै साथीहरुलाई यस किसिमको केसमा फसाउन सकियो भने राजनीतिकरुपमा डिमोसन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले त्यतिबेलाको प्रशासन र अहिलेको पुलिस प्रशासनको नियत हेर्दा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउा रहेको छ । कालिबहादुर खामले कमजोरी गरेनन हामी भन्दैनौा । उनका कमजोरी पनि केही होलान्, यो छानबिन पूरा नभई भन्न सकिन्छ । पछिल्लो समय उनीमाथि चिनियाा यार्सागुम्बा व्यापारीसागको कुरा हतियार राखेको कुरा प्रचारमा आएको छ । यो वाहियात हो । उनीमाथि आरोप लगाउने षड्यन्त्र मात्र हो । मुख्य गरी रामहरि श्रेष्ठको प्रकरणमा कालिबहादुरलाई तान्नुपर्छ भन्ने डिजाइनमा यी सबै नाटक गरिएको हो । हामी उनको ’boutमा आन्तरिक छानबिन गर्छौं । उनको कोठामा यार्सागुम्बा हुनु नौलो होइन, उनको गाउमा नै त्यसको व्यापार हुन्छ । रामहरि काण्डमा जोड्नकै लागि यो प्रपञ्च गरिएको हो भने त्यो हामीलाई मान्य हुादैन । हामीबाट कालिबहादुरलाई पुलिसलाई बुझाउने काम हुादैन ।
०	यतिबेला जनमुक्तिसेना, वाइसिएललगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमला बढेको छ, यसमा पार्टीले अडानका साथ काम गरेको पाइए न नि ?
शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएका बाुादाहरु दुवै पक्षलाई समानरुपले लागू हुनुपर्छ । विगतको कााग्रेस र पञ्चहरुको कार्यशैली हेर्दा सत्तामा बसेकाले जे पनि गर्न पाइने र सत्ताभन्दा बाहिर रहेकोलाई उसले कुनै पनि घटना घटायो भने कुनै विषय बनाएर फसाउने चलन रहादै आयो । खुमबहादुर खड्काजस्ता गुण्डाहरु यो देशमा अहिले पनि छन् । त्यस किसमका गुण्डाहरुले विगतमा हाम्रा साथीहरुको ठूलो संख्यामा हत्या गरे । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रा दुई सयभन्दा बढी साथीहरुको हत्या भएको छ । शान्तिप्रक्रियामा उल्लेख भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी अधिकतमरुपमा लागौा । तर त्यही अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कार्यलाई कमजोरीको रुपमा लिादै हामीमाथि जे गर्ने गरिएको छ, त्यो हामी सजिलै सहन गर्न सक्दैनौा ।
०	तपाईंहरुलाई घेराबन्दीमा पार्न सबै दलहरु एकजुट हुादैछन् यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधान त आकशको फल हुने भयो होइन ?
हाम्रोविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी त छादैथियो, पछिल्लो समय राष्ट्रिय घेराबन्दीसमेत हाम्रो विरुद्ध हुन थालेको छ । प्रतिगमनकारी शक्ति यतिबेला पूरै हाम्रोविरुद्धको घेराबन्दीमा छ । यो घेराबन्दी आमनेपाली जनताले तोड्ने हो कुनै व्यक्तिविशेषले होइन । नेपललाई स्वतन्त्र राष्ट्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने लडाइाले मात्र यो घेराबन्दी टुट्ने अवस्था छ । राष्ट्रियताको कारण नेपली जनतालाई एकजुट नगरी घेराबन्दीविरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन ।
०	अन्त्यमा क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकमार्फत् आमजनसमुदायलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले मुलुकमा जेजस्ता अन्योलताहरु देखापरेका छन्, ती सबै राष्ट्रियतामाथिको ठाडो चुनौती हो । राष्ट्रियतामाथि देखिएका चुनौतीहरुलाई नेपाली जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली जनताले राष्ट्रिय चुनौतीलाई हल गर्न पहल लिनुपर्छ र त्यसको लागि तयार रहन म सम्पूर्ण जनतालाई यस पत्रिकामार्फत् आग्रह गर्न चाहन्छु ।
Posted in क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक
« अघिल्लो लेख
अर्को लेख »
Monthly Archives जुन 2012 मार्च 2012 फ्रेवुअरी 2012 जनवरी 2012 डिसेम्बर 2011 नोभेम्बर 2011 अक्टोबर 2011 सेप्टेम्बर 2011 अगस्ट 2011 जुलाई 2011 जुन 2011 मे 2011 अप्रील 2011 फ्रेवुअरी 2011 जनवरी 2011 डिसेम्बर 2010 नोभेम्बर 2010 अक्टोबर 2010 सेप्टेम्बर 2010 अगस्ट 2010 जुलाई 2010 जुन 2010